Ụmụaka Botulism | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
nwa ọhụrụ botulism
Mmetụta ọjọọ nke mmanụ aṅụ na maple sirop na ụmụ ọhụrụ
Enweghị mmanụ aṅụ na ọ bụghị maple sirop ruo mgbe ọbụlagodi 1. ụbọchị ọmụmụ
A gaghị a na-ahụkarị ma nnọọ oké ọrịa na ụmụ ọhụrụ bụ nwa ọhụrụ botulism. Botulism na-ewepụtara Latin botulus (soseji), a na-akpọ anụ nsi na na-a-eyi ndụ egwu, site Nsí botulinum (Clostridium Nsí nje bacteria) mere na nsi.
Nwa botulism site na mmanụ aṅụ ma ọ bụ maple sirop
Dị ka onye na-ebu ọgwụ nke toxin bụ mgbakwunye mmanụ aṅụ ma ọ bụ marop sirop ka ọ bụrụ sweeten z. Dị ka teas ma ọ bụ baby porridge akpọ. Mmanụ aṅụ na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ, ọ bụkwa nri digestible, nke a na-ejikwa maka nzube ahụike. A na-enye ọtụtụ ihe ahụike ahụ na-acha odo odo ma mana nri a anaghị edozi ya. Iji gbuo mkpụrụ nje ahụ, a ghaghị iwe ọkụ karịa elu 120 Celsius maka ogologo oge. Nke a agaghị ekwe omume na mmanụ aṅụ. Ọ bụ ihe okike na ya, ya mere ọ na-enyekwa ya n'ụlọ ahịa.
Ụmụaka Botulism - Ihe ize ndụ nye ụmụ ọhụrụ site na mmanụ aṅụ
Agụghị oké ichekwa ma ọ bụ hermetically kaa akara nri, n'ihi na mmanụ aṅụ ma ọ bụ maple sirop, nke e mmeru na nsí, na spore etolite na nje bacteria na iru oriri na nsia osisi.
Na ụmụ ọhụrụ ruo otu afọ, ndị kasị ngwangwa 6 ọnwa, na ihe ejighị n'aka ahu ozize na-adịghị ike nsia osisi, bụ nsi-ebu site na nsia septum n'ime n'ọbara na site mgbe ahụ na ọ na-akawanye na akwara endings na elu ụjọ usoro ebe ntọhapụ nke otu ihe dị mkpa neuronal ozi a na-gbochie.
Ihe nsi na-emechi ihe mgbaàmà n'etiti akwara na akwara. Ọkpụkpụ na-akpụ akpụ nke ahụ dum na akụkụ ahụ na akwara nke eriri afọ bụ ihe dị njọ. Enweghị mmetụta ọ bụla nke toxin na-apụta mgbe niile ozugbo, mgbe mgbe, a pụrụ ịmata ihe mgbaàmà ahụ mgbe ụbọchị, ọbụna izu. Idem emem anya mọzụlụ, enweghị ọdịdị ihu, mkpọnwụ nke akụkụ okuku ume uru ruo iku ume ọkụ ọkụ na cessation nke iku ume, ilo, na ike ahu adịghị ike nke nweekwa usoro ihe ịrịba ama nke nsi site Nsí na pụrụ iduga ọnwụ ma ọ bụrụ na ozugbo, mberede na kpụ ọkụ n'ọnụ na-elekọta. N'okpuru nlekọta nlekọta ahụ ike zuru oke ma ọ bụrụ na ị ga-eleba anya mebiri emebi.
Kwa afọ a na-akọ akụkọ banyere ụmụaka botulism na Robert Koch Institute na Berlin. A na - eme nnyocha na ụdị nsị na mmetụta ya na Europe kemgbe 1976, mgbe ọnụọgụ mbụ ahụ mere ma chọpụta na America. Ọtụtụ ndị ọzọ eji nwayọọ nwayọọ apụta n'Australia, United States na ebe obibi Japan. E nwekwara njikọ na ọrịa mberede nwa ọhụrụ. Na Europe, e nwere ọrụ ịkọ akụkọ n'okpuru Iwu Nchedo Ọrịa.
Maka ahụ ike nke nwa ọhụrụ ahụ, ruo n'ụbọchị ọmụmụ ụbọchị mbụ, a ga-enye onyinye nke mmanụ aṅụ na maple syrup iji zere ihe ize ndụ nwa botulism iji zere.
Na ụmụ ọhụrụ, ụmụ,-eto eto na ndị okenye, na n'ụzọ zuru ezu na-arụ ọrụ nsia na osisi ike colon septum, ndị nsí na-anyụpụ, na-enweghị ọ abatakwa n'ọbara nke ahụ, dị ka ọ na-adị site na dị na mmanụ aṅụ na ala doses. A na ndekọ nke nsi na-enye nwa ara nne, na mmanụ aṅụ na-ada ka ha si otú a na-nyere.
Otú ọ dị, ihe na-abụghị nke a bụ ọnyá na ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke eriri na mmanụ aṅụ. N'izugbe, ekwesiri ighota na mmadu kwesiri izere iri nri nwa, nri ndi ozo na tii / ihe ọṅụṅụ n'ozuzu ya, n'ihi na nke a nwere ike ibute ma kpatara nsogbu ma obu oria.
N'ụzọ dị mwute, a hụrụ akpa botulism nwa na 1976 na California. Na Germany, enwere otu ihe dị otú a n'afọ ọ bụla kemgbe 1996. Na ngbu nke ụmụaka toxins na-egbu egbu. Otú ọ dị, ọ ga-ewe ụbọchị ole na ole n'izu maka mgbaàmà ahụ ka ọ pụta ìhè. Ya mere, ọ na-esiri ndị dọkịta ike ịchọpụta njikọ dị n'etiti nri na ọrịa. Ọ bụrụ na toxin abanye n'ime ọbara site na eriri afọ, a na-ekesa ya n'ime ahụ. Ọ na-agbaso ihe nkwụsị ahụ ma gbochie ihe ndị dị mkpa dị na ya, dịka mgbawa ahụ. Ihe si na ya pụta bụ ọnyá ahụ. O di nwute, dị ka onye toworo eto, ị gaghị agwọ nwa ahụ na antitoxin.